Ogaden News Agency (ONA) – Doorashadii Jaaliyada Germany oo Lasoo Gabagabeeyay Iyo Qorsheyaal Cusub oo Jaaliyada Loodajiyay.
Doorashadii Jaaliyada Germany oo Lasoo Gabagabeeyay Iyo Qorsheyaal Cusub oo Jaaliyada Loodajiyay.
Waxaa shalay ooy taariikhdu ahayd 7.6.2015, lagu qabtay magaalada Frankfurt ee dalka Germany shir siwanaagsan loosoo agaasimay. Waxaa shirkan soo abaabulay Jaaliyada Somalida Ogadenya ee dalka Germany. Ujeedada oogu wayn ee kulankan looqabtay ayaa ahayd doorashada Gudiga Jaaliyada Ogadenya ee wadanka Germany.
Furitaankii iyo soodhawayntii xubnihii kasoo qaybgalay shirka kabacdi waxaa madasha shirka lagu soo bandhigay warbixin aad uqiima badan ooy soobandhigeen Maamulka Jaaliyada Somalida Ogadenya ee wadanka Germany iyo waxqabadkoodii mudadii lasoo dhaafay eey xilka hayeen. Gudoomiyaha Jaaliyada Mudane Maxamad Faarax ayaa warbixin waafi ah oo jaaliyada kusoobsan soojeediyay. Sidoo kale waxaa isna warbixin guud oo kusaabsan Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Somalida Ogadenya (OYSU) ee dalka Germany soo jeediyay Mudane Maxamad Carab.
Dhanka kale waxaa isna warbixin meelo badan taabanaysa oo kusaabsan xoojinta iyo dardar galinta xaalada Halganka Somalida Ogadenya ee laxidhiidha Saxaafada, Samafalka iyo Diblomaasiyada kasoo jeediyay madasha shirku kasocday Gudomiye Kuxigeenka Hogaanka Warfaafinta JWXO Mudane Maxamad Cali. Wuxuu Mudanuhu aad oogu adkeeyay kaqaybgale yaashii kulankan in la,iska kaashado sidii halganka gobanima doonka Somalida Ogadenya looxoojin lahaa loona siidardar galin lahaa.
Shirkan ayaa lagu doortay gudi isku dhaf ah oo iskugu jira Samafalka iyo Maamulka Jaaliyada. Gudigan ladoortay oo ka kooban 11-xubnood ayaa lagu wadaa ineey dardar galin doonaan waxqabadka iyo horumarinta qorsheyaasha Jaaliyada horyaala ee ladoonayo in lahirgalin haduu allaha awooda lihi karaali ahaado.
Kulankii Jaaliyada Somalida Ogadenya ee Germany ayaa kusoo idlaaday jawi aad uwanaagsan oo farxad leh iyadoo la,isku wada afgartay natiijadii kulankan kasoo baxday iyo waliba qaabkii loosoo agaasimay shirka intuba.